Ogaden Online: The official homepage of Ogaden on the Internet - Jaaliyaadka galbeedka Maraykanka oo taageero buuxda u diray go’aanka JWXO ee wada hadalka xukuumadda Ethiopia
Text size	Home Horn NewsDjibouti Somalia Eritrea Kenya Ethiopia Ogaden WararkaOgaden Itoobiya Soomaaliya Kenya EntertainmentMusic HealthDiet and Fitness You and Your Family Commentary & AnalysisEditorial Opinion Community EventsWararka Tacsi Tahniyad Ogeysiis Announcement Radio Xoriyo Radio ICDSabti Axad Isniin Arbaco Radio Qorahay Home Wararka Ogaden Jaaliyaadka galbeedka Maraykanka oo taageero buuxda u diray go’aanka JWXO ee wada hadalka xukuumadda Ethiopia
Jaaliyaadka galbeedka Maraykanka oo taageero buuxda u diray go’aanka JWXO ee wada hadalka xukuumadda Ethiopia	Saturday, 20 October 2012 00:14	administrator	Jaaliyaadka Soomaalida Ogaden ee galbeedka Maraykanka ama la’isku yidhaado West Coast waxay taageero buuxda u dirayaan Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia go’aankii ay qaadatay isla markaana ay ku diiday iney saxiixdo dastuurka Ethiopia. Qodobkaas oo ahaa mid aan ku jirin qodobadii la isla afgartay wareegii koobaad ee wadahadalka isla markaana xukuumadda Ethiopia ay si cad u jabisay, sababayna inuu wadahadalku joogsado.Haddaba dhamaan ururada bulshada ee jaaliyaadka West Coast sida ururada haweenka, dhalinyarada, odayada, wax garadka, culima awdiinka, shuyuukhda iyo aqoonyahanka waxay hambalyo iyo taageero buuxda halkaan uga diraayaan Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia iyo go’aanka aday ee ay qaadatay. Waxaana ballan ku qaadaynaa inaan halganka sadex jibaarno hiil iyo hoona lagarab istaagno. JWXO waxay garabka ku qaaday masiirka iyo aayaha ummadda Soomaalida Ogadenia iyo sidii xornimo taama ah loogu soo dabaali lahaa. Waxaana kusii dhiiri galineynaa ineysan marnaba ka tanaazulin ilaa hadafkaa laga gaadhayo. Halganka ka socda Ogadenia ma’aha mid lagu raadinayo ka mid noqonshaha Ethiopia iyo dastuurkeeda ama jagooyin iyo maamul goboleed. Balse waa mid kusalaysan sidii la isaga dulqaadi lahaa gumeysigan boqolka sano xaqdarada inagu heystay. Halgankani wuu ka weynyaha xukuumada tigreega iyo dastuurka ay sameeyeen 1991kii, mana aha mid ina khuseeya. Sidaa daraadeed go’aanka ay JWXO hadda qaadatay ee ay ku diiday qaadashada dastuur kusheegga runtii waa mid baal dahab ah kagalaya taariikhda Ogadenia, Ugu dambayn waxaan madaxda Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia, ciidamada qalabka sida ee CWXO, shacabka gudaha Ogadenia, ururka OYSU iyo dhamaan jaaliyaadka dibadda kula dardaarmeynaa ineysan marnaba ka tanaazulin halganka ilaa laga gaadho hadafkii loo aas-aasay kaasoo ah hanashada xonimada Ogadenia. Waayo halganka maal, muruq iyo maskad ayaa loo soo huray, boqolaal kun ayaa u naf weydey, u agoontoowday, asay uqaaday ama u qaxday. Qaadashada dastuurka Ethiopia iyo ka tanaazulka halganka wakhtigan xaadirka iyada oon hadafkiisa lagaadhin waa khasaare iyo jab iyo waliba caddaalad daro intii halyey ee ushahiiday waana mid aakhiro la inugula xisaabtami. ______________________________________________________________________________-Jaaliyadda S. Ogadenia California-Jaaliyadda S. Ogadenia Colorado-Jaaliyadda S. Ogadenia Texas-Jaaliyadda S. Ogadenia WashingtonTweet